Dadaalada Xoogan Ee Meel marinta Qorshayaasha Horumarineed - Cakaara News
Dadaalada Xoogan Ee Meel marinta Qorshayaasha Horumarineed
Jigjiga(CN) Sabti 5tii September 2015, Gudoomiyaha Degmada Awbare mudane Maxamed Cabdi Faarax oo xafiiskiisa ugu waramay shabakada wararka ee cakaara ayaa sheegay in ay dadaalo xoogan ugu jiraan hirgalinta qorshayaasha koboca dhaqaalaha ee jaan-qaadka 2,aad GTP2 Ee uu dalku kaga mid noqonayo wadamada uu dhaqaalahoodu dhex dhexaadka yahay kuwa ugu horeeya.
Waxa kale oo uu gudoomiyuhu sheegay in qorshayaasha u dajisnaa maamulka degmada awbare kuwa dheer, kuwa dhexe iyo kuwa dhaw oo ah kuwo dheeli tiran oo ka tarjimaya ka jawaabida baahiyaha shacabka korna u qaadaya koboca dhaqaalaha in dadaal xoogan ugu jiro maamulka degmadu hirgalinta iyo meel marinta qorsheyaashaas.
Isaga oo gudoomiyuhu hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay in sanadkan 2008TI ay meel fiican marayso yoolkii u yaalay degmada lana xoojinayo hab’raacyadii fulineed ee yoolkani. Mar uu ka hadlayay dhinaca waxbarashada ayuu xaqiijiyay in hadda lagu jiro diwaangalinta ardayda sanadka oo uu yoolku yahay in la diwaangaliyo tiro aad uga badan midii sanadkii hore laguna jiro abaabulka iyo wacyigalinta gaadhsiinta bulshada sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen doorkooda kaga aadan dhinaca waxbarashada.
Wuxuuna ka warbixiyay in guud ahaanba degmadu sanadkan xooga saarayso dhinaca wax soo saarka beeraha. Sarac aad u badana bulshadu goosan doonto sanadka. Sababta oo ah roobabkii gu'ga oo sifiican uda'ay iyo wacyigalin balaadhan oo lasameeyay.
Ugu danbayntii gudoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyay in maamulka degmada oo kaashanaya shacabka ay dadaalo xoogan ugu jiraan ka midho dhalinta hayaanka hiigsiga meelmarinta istaraatajiyadaha jihooyinka qorshayaasha horumarineed oo dhinaca kasta leh.